Maitiro ekugadzira musangano wakarongwa kana wepakarepo muMicrosoft Teams - WebSetNet
Maitiro ekugadzira musangano muMicrosoft Teams
Pane nzira nhatu dzekugadzira musangano muMicrosoft Teams.
1. Sarudza "Ronga musangano" icon muTemu hurukuro bhokisi kuti uite musangano nevako vaunoshanda navo muTemu.
2. Enda ku "Karenda" kuruboshwe rweMicrosoft Teams desktop app uye sarudza "musangano mutsva" mukona yepamusoro kurudyi.
3. Sarudza mhando yenguva muTemu yeKarenda. Fomu yekuronga ichavhurika kurongedza ruzivo rwemusangano uye kukoka vanopinda musangano.
Inoshanda kune Zvese Windows 10 Versions
Kugadzira musangano neMicrosoft Teams inzira yakanaka yekugara uchibatana nevako vaunoshanda navo pamaprojekiti iwe uchishanda uchibva kumba, kana chero nguva urikushanda kure. Kufungidzira iwe kana sangano rako iMicrosoft 365 mutengi, wave kutotora mukana wekusangana kwese kwese kweMicrosoft inopa. Heano maitiro ekugadzira musangano muMicrosoft Teams.
Heano nzira nhatu dzekugadzira musangano muMicrosoft Teams.
Sarudzai karenda icon pasi peiyo Teams chat box kuti uite musangano nevako vaunoshanda navo muTeams. Kana iyo Kenduru icon isipo, tarisa pamwe nesangano rako IT maneja.
Sarudza karenda kuruboshwe kweMicrosoft Teams desktop app uye sarudza Musangano mutsva in the upper right corner.
Sarudza mhando yenguva mu karenda.
Paunongoita chero chipi zvacho chetatu zvataurwa pamusoro, sarudzo yekarenda ichavhurika kurongedza ruzivo rwemusangano. Shandisa Scheduling Assistant kubatsira kuronga nguva yemusangano inoshanda kune wese munhu, chero zvawo kuti masheti ebasa ravo nemisangano iripo yatove yakamiswa mukati meMicrosoft Teams karenda. Paunenge uchinge wapedza kuzadza nguva, sarudzo dzinopinda, nzvimbo (dzemakamuri kana dzemakamuri musangano musangano nenzvimbo dzakatomisikidzwa muTemu), uye nemisangano yemisangano, tinya Chengetedza. Matimu anozotumira Microsoft Teams musangano ziviso kana email chinongedzo kune vese vanopinda musangano.
Kana iwe wedzera Teams chiteshi kumusangano wako, iwe uchafanirwa kutumira chinongedzo kumusangano kana paine vanhu vakokwa kumusangano wako kubva kunze kwesangano rako. Sarudza tuma kana wapedza. Matimu anozongoerekana atumira kokero kune vese vakokerwa kuburikidza neruzivo muMicrosoft Teams kana kuburikidza neemail kana vari kunze kwesangano rako.
Koka vanhu vanobva kunze kwesangano rako
Microsoft Teams zvakare inobvumira vashandisi kukoka vanhu kumisangano yavo yeTeam kubva kunze kwesangano ravo. Kuti ugone kukoka mumwe munhu kubva kunze kwesangano rako, iwe uchafanirwa kuziva yavo yakazara email kero.
Sarudza Wedzera inodiwa vanopinda. Kana paine munhu anogona kusarudza anogona kuenda Wedzera Inesarudzo vanopinda panzvimbo.
Nyora kero yemunhu yakazara email (kureva [Email akadzivirira]. Sarudza Kukoka (email kero). Iyo email kero iwe yaunopa ichagamuchira iyo email ine yekukoka link kune iyo Matimu musangano.
Ronga musangano kubva kuOld View
Kana yaiswa, Microsoft Teams inogona kuisa Outlook yekuwedzera-mumvumo yako. Iyo Outlook yekuwedzera inokubvumira iwe kuti ugadzire mitsva yeTeam misangano zvakananga kubva kuOldview. Nenzira iyi, iwe haufanire kuchinja pakati peOutlook neMicrosoft Teams, vashandisi vanogona kuona, kugamuchira, kuramba, kana kubatana nemisangano, kubva mukati meyipi programu.
Gadzira musangano wepapo
Kana iwe uchida kumisa musangano unokurumidza paminiti yekupedzisira, unogona kugadzira musangano unokurumidza muTemu. Izvi ndezve zviitiko apo iwe uri muKarenda kana mune maTeams chiteshi uye unoda kusangana newaunoshanda naye kweanokurumidza maminetsi gumi musangano kuchinjana mazano kana kupa kukurumidza kuenderera mberi pakufambira mberi kwako kwepurojekiti.
Kana iwe uri muMatimu karenda, pane kusarudza Musangano mutsva, sarudza Tosangana izvozvi.
Kubva ipapo, iwe unozokwanisa kuwedzera zita remusangano, sarudza kana iwe uchida kushandisa vhidhiyo kana kwete, uye tora yako yaunofarira odhiyo. Paunenge wagadzirira kutanga musangano, sarudza Join ikozvino.
Pamakona ekumusoro kurudyi bhokisi rakanyorwa vanhu ichavhura kuti ikubvumidze kukoka mumwe munhu kumusangano wako wepapo. Ingo tanga kunyora zita remunhu iyeye kana vanhu vauri kuda kukoka kumusangano wako wekukurumidza. Ivo vanogashira runhare muMicrosoft Teams kuti vapinde musangano wako.
Kana ukasarudza, iwe unogona zvakare teedzera kubatana info link kune yako clipboard uye utumire kukokwa kunongedza mune email kana munhu kana vanhu vari kunze kwesangano rako. Kana vako email vanogamuchira vasina Microsoft Teams, vanogona kujoina musangano wepo nekungoshandisa yavo internet browser.
Iyi sarudzo yakanaka yekushandisa kana iwe usinga sangana nekuraurisa kugona muOutlook kana maTimu. Sangana izvozvi zvinoshanda semisangano yakarongwa muTemu yeKendari. Wese ari muMusangano izvozvi musangano anogona kuwana zvese zvakagovaniswa musangano, kusanganisira musangano wekutaura, kurekodha, uye chero mafaera kana zvinyorwa zvakagovanwa mumusangano.
Mune Teams chiteshi
Kana iwe uri mune Teams chiteshi uye uchida kutanga musangano ipapo, enda kune Posts tora uye enda kwaunonyora mameseji matsva muchiteshi uye sarudza icho Tosangana izvozvi icon.
Ukangosarudza iyo Tosangana izvozvi icon, musangano wekurumidza unozovhura mukati chaimo mutsetse weti.
Unogona kushandisa Tosangana izvozvi bhatani kuti utange musangano wepapo kuti uwane kujekeswa pamusoro pechinhu chisingagone kugadziriswa kuburikidza nekutumira mameseji. Ingo pindura kune chero chirevo chekupinda mune yako Teams chiteshi uye sarudza Tosangana izvozvi kuenderera mberi nekukurukurirana. Paunosarudza Tosangana izvozvi munhu wese ari mumutsara wekutaura anokokwa kumusangano wepapo.
Iwe unayo chero nyaya dzekugadzira musangano muMicrosoft Teams? Ngatizivisei mune zvakataurwa.
Maitiro Ekugadzira Iyo Yekugadzirisa Karenda muGoogle Chalenda [Mahara Matemplate]
Best software yakasununguka yekuenzanisa Outlook Calendar neGoogle Calendar
← 8 akanakisa emahara VPNs yeNetflix [Windows 10 & Vashandisi veMac] AMD inozivisa Ryzen PRO 4000 Series processors yemabhizimusi laptops →